काठमाडौं : कुलमान घिसिङ अहिले च’र्चामा रहेकामध्ये एक हुनु । उहाँको आँ’सु , रो’दनभित्र मुलुकको आशा भ’रोसा अनि विकृति र कुण्ठा पनि सँगसँगै च’र्चामा छ । आखिर कुलमान को हुन् ? उनले जीवनमा कसरी प्रगति गरे ? के के ह’ण्डरहरू खाए ? .
भने सन्द’र्भमा योहो टेलिभिजनको पीवाईएल सो (PYL SHOW) कार्य’क्रममा कुलमान घिसिङसँग गरिएको रोच’क कुराकानी । रामेछापको दु’र्गममा गाउँको सरकारी स्कुलमा पढेको एक सामान्य किसानको छोरो अहिले नेपाली जनताको मन’मुटुमा बास बस्न सफल भएको छ ।
देशलाई लोड-सेडिङबाट मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भि-त्र्याउने अभि’यन्ता कुलमान घिसिङले विद्यालय पढ्दाको अनुभव यसरी सुनाउँछन् : गाउँमा टुकी बालेर पढ्थेँ । राति अबेरसम्म टु’की छेउमा बसेर पढ्दा नाकमा कालो ध्वाँसो समेत बसेको हुन्थ्यो । काठमाडौँलाई लोड-सेडिङ मुक्त गराएर चर्चा कमाएमा कुलमान भन्छन्न् मैले काठमाडौँ आएपछि नै हो, बिजुली देखेको ।
विद्यालयमा सधैं प्रथम हुने कुलमानले जब काठमाडौँमा आएर बिजुली देखे, तब उनले क’सम खाए मेरो गाउँमा पनि यसैगरी बिजुली बाल्छु । अहिले उहाँले गाउँमा बिजुली बालिसकेका छन् । उहाँले आफ्नो गाउँमात्रै हैन, देशैभरि उज्या’लो बनाउने अभिय’न्ता बनेका छन्न् ।
Next भाग्य न्यौपानेलाई ठुलो झ’ट्का: भाग्यबिरुद्ध मु’द्दा दर्ता गर्दा जे देखियो … (हेर्नुहोस भिडियो सहित)